Al-shabaab oo Xukun Ku Fuliyay Rag Basaasiin u ahaa Maamulka Jubba-land – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Al-shabaab oo Xukun Ku Fuliyay Rag Basaasiin u ahaa Maamulka Jubba-land
Maxkamadda Xarakada Al-shabaab ee Gobalada jubooyinka ayaa xukun dil ah ku fulisay laba ruux oo la sheegay in ay jaawasiiis u ahaayeen maamulka uu hogaamiyo Madaxweynaha Jubba-land Axmed madoobe jubalanad.
Barxad weyn oo ku taalla degmada jamaame ee Gobalka jubada hoose uu ka dhacayay dilka lagu fulinayay labada ruux ee magacyadooda lagu shegay Siidii Axmed Muxamed Maadey oo da,diisu tahay 26 Sano iyo -Ibraahim Abuukar Farxaan oo Da,diisu tahay 27 Sano jir ah oo ay dagaalamayasha Xarakada Al-shabaab ku eedeyen labadan ruux ee dilka lagu fuliyay iney basaasiin u ahaayeen maamulka jubalanad.
Qaadiga maxkamadda Al-shabaab ayaa sheegay in labadaan ruux oo rag ahaa ay ku dhaceen Xadu Ridah ayna qirteen inay ahaayeen jawasiis deegaannada Xarakada Al-shabaab ka taliso ka waday howlo ay ugu basaasayeen maamul goboladeedka jubaland ee dowlada somalia hoos taga.
Boqollal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha uu dilku ka dhacayay, si ay u daawadaan toogashada labadan qof oo ay toogteen xubno ka tirsan ciidamada Alshabaab oo ku hubeysnaa qoryaha Ak47.
Mas’uuliyiinta Al-shabaab ee gobalada jubooyinka, oo dilka kaddib ka hadlay goobta ayaa sheegay in cid walba oo lagu hello basaasnimo la marin doono xukunkan mid lamid ah kan.
Al-Shabaab ayaa dhowr mar falal noocan oo kale ah ka fuliyay degmooyinka ay ka joogaan Gobolada dalka Somaaliya iyagoo ku eedeeya iney jawasiis u yihiin dowladaha mareykanka kenya ithopia iyo dowlasa federaaalka somalia.